आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट : ‘उद्योगका अवरोधको निकासलाई प्राथमिकता देऊ’ | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट : ‘उद्योगका अवरोधको निकासलाई प्राथमिकता देऊ’
on: May 16, 2019 मुख्य खबर, समाचार
वीरगञ्ज । वीरगञ्जको निजीक्षेत्रले उद्योग व्यवसायका अवरोध हटाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । आयातनिर्यातको मुख्य मार्ग र बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर रहेको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले हालसम्म संकलित सुझावलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । हालसम्मका बजेटले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझाव समेट्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफै यसक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीबाट सुझाव लिन केही दिनअघि वीरगञ्ज आएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेको व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएका मन्त्री डा. खतिवडाको उपस्थितिमै बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय उठाइएकाले आगामी बजेटमा यस्ता विषय सम्बोधन हुनेमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया आशावादी छन् ।
चितवनमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज, असारमा मात्रै करीब २ अर्ब निकासा